တရုတ်စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားအကြီးစားတာဝန်ဖြစ်သော Rotomolding ဖောင်းပွသော Banana Pontoons Tubes ရေမျောရေရေစက်ဘီးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံအတွက်ရေကူး Buoy Pedal Boats | Jinghe
အရည်အသွေးမြင့် rotomolded polyethylene လှေ Tooling
ခိုင်ခံ့သောပလပ်စတစ် feed ကို Hopper rotomolded
အရည်အသွေးမြင့်ချစ်စရာ Rotomolding အလှဆင် Puppy Displ ...
စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားအကြီးစားတာဝန်ရှိသည့် Rotomolding ဖွတ်နိုင်သောငှက်ပျော ...
ရုံးခန်းအတွက် Rotomodling ပလတ်စတစ်အနုပညာထည်မြင်း
ပလပ်စတစ် rotomold နောက်တွဲယာဉ် rotomolded
Marine Floater Buoy အမှတ်အသား Light Buoy Marine Floatin ...
စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားအကြီးစားတာဝန်ဖြစ်သော Rotomolding fl In fl Infl fl fl able anana anana anana anana anana anana anana anana anana anana anana anana anana anana anana anana B Fl Fl anana Fl Fl anana for for Water for for Water Water Water Water for for Water Water Water ရေပေါ်စက်ဘီးဆိုင်ကယ်စီးရန်အတွက်ရေကူး Buana နင်းလှေများ
> ၈ နှစ်
ရေပန်းခြံ၊ ပင်လယ်ပန်းခြံ၊ မြစ်၊
တစ်နှစ်လျှင် 1000 Piece / အပိုင်းပိုင်း
အရေအတွက် (အပိုင်းအစများ) ၁ - ၅၀ > ၅၀
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏စုံစမ်းမေးမြန်းမှုအပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကိုးကားချက်များ။ အကယ်၍ သင်စျေးနှုန်းရရန်အလွန်အရေးကြီးနေလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏စုံစမ်းရေး ဦး စားပေးကိုကျွန်ုပ်တို့အလေးထားစဉ်းစားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပါ။၂။ နမူနာကိုမင်းရဲ့အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးဖို့ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
စျေးနှုန်းအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်သင်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးရန်နမူနာများသင်လိုအပ်နိုင်သည်။ ဒီဇိုင်းနှင့်အရည်အသွေးတို့ကိုစစ်ဆေးရန်နမူနာကွက်လပ်တစ်ခုသာလိုအပ်ပါက။ သငျသညျအမြန်ကုန်တင်မတတ်နိုင်သကဲ့သို့ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအခမဲ့နမူနာပေးပါလိမ့်မယ်။3. အဘယျသို့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ခဲအချိန်ကော?
ဟုတ်ပါတယ်၊ အော်ဒါမှာယူမှုအရေအတွက်သည် *** pcs ထက်ပိုရန်၊ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းရရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ဟုတ်ပါသည်၊ ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်နှင့်ကုန်ချောထုတ်လုပ်သည့်အဆင့်တိုင်းကိုရေကြောင်းမပို့မီ QC ဌာနမှစစ်ဆေးလိမ့်မည်။
နောက်တစ်ခု: အရည်အသွေးမြင့် rotomolded polyethylene လှေ Tooling
Rotomold ဒီဇယ် Tank ပလပ်စတစ် Tank အိတ်ဆောင်သေဆုံး ...
စိတ်ကြိုက်ပလပ်စတစ်ကလေးများထိုင်ခုံ Rotomolding မှို
Rotomolded စစ်ရေးကိရိယာ box ကို
ပလပ်စတစ် LLDPE အကြံပေးအဖွဲ့ rotomolded